Ogaden News Agency (ONA) – Amnest International oo Kahadashay Xidhiga Cabdi Ilay.
Amnest International oo Kahadashay Xidhiga Cabdi Ilay.
War qoraal ah oo ay soosaartay Hay’ada xuquuqul insaanka ee Amnesti International ayaa lagu sheegay xadgudub yadii faraha badnaa ee kadhacay wadanka Ogaadeeniya in uusan gaysanin Cabdi Ilay oo kaliya, balse ay jiraan dad kale oo kula jiray faldambiyeedkaas.
Hay’ada Amnest ayaa sheegtay in uu cabdi ahaa dambiile dhib badan gaystay hase yeeshee gumaadka shacabka ay shirkad ku ahaayeen saraakiil kale oo katirsanaa maamulkii hore ee xukuumadihii Itoobiya soomaray.
Hay’ada ayaa xidhayga Cabdi oo kaliya laxidhay kutilmaantay cadaalad kala dhiman waxayna sheegtay in dadkii cabdi dambiga lagalay ay joogaan isla markaana loobaahan yahay in cadaalada lahorkeeno ama isku meel lamariyo cabdi iyo guruubkii ay wada shaqaysan jireen.
Hay’ada ayaa sheegtay in gabod faladii iyo xasuuqii baahsanaa ee Ogadenia kadhacay aysan kufilayn in Cabdi lasoo xidho oo kaliya, waxayna Hay’adu kutalisay in sal iyo baar cadaalada lawajaho oo aysan cadaaladu noqonin hadba ninkii laga awood badan yahay oo kaliya.
Sida aan lawada socono dambiile Cabdi Maxamuud Cumar ayaa ahaa dhagax lasoo tuuray oo lagu burburiyay shacabka Soomaalida Ogadenia waxaana maanta xaadir ah saraakiishii sootuurtay oo si toos ah ubixisay amarka uu Cabdi dadkiisa kugumaaday.
Hase yeeshee waxaa dadka shacabka ah ee Soomaalida Ogadenia umuuqata in aan waxba laga qabanaynin dadkii lahaa amarka shacabka Soomaaliyeed lagu xasuuqay balse ay cadaaladu qabanayso oo kaliya qofka Soomaaliga ah oo aan isagu lahayn awood uu isku difaaco.